Ethiopia ayaa bilowday buuxinta biyo xireenka muranka ka taagan yahay ee ay ka dhiseyso… – Hagaag.com
24 Seteembar 2020 in National // RW Somalia iyo Axmed Madoobe ayaa ka wada hadlay sidii looga wada shaqeyn lahaa arrimaha…
24 Seteembar 2020 in National // Xaliimo Yarey oo xafiiskeeda kula kulantay Danjiraha Sweden ee Somalia Amb. Staffan Tillander…
Ethiopia ayaa bilowday buuxinta biyo xireenka muranka ka taagan yahay ee ay ka dhiseyso…
Posted on 16 Luulyo 2020 by Admin in World // 0 Comments
Ethiopia ayaa bilowday buuxinta biyo-xireenka weyn ee ay ka dhiseyso wabiga Nile, sida uu Arbacadii xaqiijiyay wasiirka biyaha ee dalkaasi.
Sudan iyo Masar ayaa labaduba ka walwalsan in biyo-xireenkan oo ku kacaya lacag dhan afar bilyan oo doollar uu u horseedi karo hoos u dhaca biyaha ee ay dalalkoodu helaan.
Mashruucan biya-xireenka ayaa sare u qaaday welwelka ay Masar ka qabto xaddidaad dheeri ah oo ku timaadda biyaha ay ka hesho wabiga Nile oo dadkeeda oo 100 milyan ka badan ay noloshoodu ku tiirsan tahay. Wabiga Niilka Buluugga ah ayaa ah isha ay Masar ka hesho 90% biyaheeda oo nadiif ah.
Afhayeenka Xoghayaha Guud ee QM Stephane Dujarric ayaa wariyeyaasha u sheegay in Xogahayaha Guud Antonio Guterres uu ku booriyey saddexda dal in ay “maalmaha soo socda ka faa’iidaystaan fursadaha si ay u xalliyaan khilaafaadka hareeyey islamarkaana u gaaraan heshiis faa’iido u leh dadkooda.”
About Admin (11447 Articles)